ထိုင်းနိုင်ငံ ဆန္ဒပြပွဲမှ ဓါတ်ပုံများ အကြောင်း
ဒါကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက Amazing Thailand လို့ အောချလောက်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံက အတိုက်အခံ PAD ပါတီဝန်များက PPP ပါတီမှ အာဏာရ ၀န်ကြီးချုပ် ဆွန်ချိုင်းအား ဖြုတ်ချရေး ဆန္ဒပြပွဲမှ ဓါတ်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲများကြောင့် တ၀ါးဝါး တဟားဟားနဲ့ အမြဲနေတတ်ကြလို့ 555 တိုင်းပြည် (ထိုင်းအခေါ် Ha =5.. ဆိုလိုတာက Ha Ha Ha ရယ်လိုက်ကြပေါ့) မှာ အတော်လေး ကယက်ရိုက်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာများဖြစ်မလဲပေါ့။
ဒါကတော့ ရဲများ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမည်ဆိုပါက ဆီးထုပ် ဆီးပုလင်းများ သုံးပြီး ပြန်လည် ခုခံမည် ဆိုပဲ။ ဤသို့ ရဲများအား ခြိမ်းခြောက်ထားခြင်းကြောင့် အ၀တ်စားအကျပ်ကလေးများ ၀တ်ပြီး ကျော့နေအောင်နေတတ်တဲ့ ထိုင်းမှ ကိုရွှေရဲများလည်း အဘယ်မျှကပ်ဝံ့တော့မည်နည်း။ (လေဆိပ်လမ်းတစ်ခုမှ သေးထုပ် သေးပုလင်းများကို ပုံပါအတိုင်း တွေ့ရစဉ်)
ဒါကတော့ ရေအကျိုးဆယ်ပါး ပေါ့ ဗျာ။ တစ်ပုလင်း7bahts ရှိတဲ့ ရေပုလင်းများ ကြိုက်သလောက်ယူ လိုသလောက်သာသောက် ဆိုပြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဆွန်ချိုင်း ပြုတ်ဖို့အရေး ဆန္ဒပြသူများအား လှူဒါန်းနေသော PAD ပါတီဝင်နှစ်ဦး။ သာဓု သာဓု သာဓု .. :P
Check in counter များရှေ့မှ ရွက်ဖျင်ကဲလားများ ထိုးပြီး အိပ်နေကြသူသော PAD ပါတီဝင်များ။ သြော် ဒီလိုပါပဲ .. ရိုသူမရှက် မြင်သူရှက် မဖြစ်ရလေအောင်များလား .. :P
မိသားစုလိုက် တပျော်တပါး လာရောက် ဆန္ဒပြကြသူများ။ ပုံပါအတိုင်း ကိုယ့်အိမ် ကိုယ့်ယာလို သဘောထားပြီး နေကြသူများ။
ကလေးမှ ခွေးအဆုံး ၀န်ကြီးပြုတ်ကြဖို့ရန် လေဆိပ်သို့ လာရောက်ဆန္ဒပြကြ။ ပုံပါ ထိုင်းပျိုဖြူချောလေးများလည်း ဆန္ဒပြတဲ့ နေရာမှာ အများအပြားဆိုပဲ။
ဆက်သွယ်ရေး ပြတ်တောက်မသွားစေရန် ပုံပါအတိုင်း Mobile Phone Charger များကို Power Cord များဆွဲ၍ အားဖြည့်ပေးနေကြပုံ။
ဆန္ဒပြသူများ အဟာရအတွက် အခက်အခဲမဖြစ်စေရန် လာရောက် ပံ့ပိုးလှူဒါန်းသူများ နဲ့ စည်စည်ကားကား။
ဈေးကွက်စီးပွားရေး စနစ်အရ .. လေဆိပ်ဆန္ဒပြပွဲသို့ လာရောက်စီးပွားရှာသူများကြောင့် ကြက်ပျံမကျသည့် ပွဲဈေးတန်းအလား စည်ကား။
Posted by MYO HAN HTUN at 7:06 PM 12 comments
လက်ကြီးမှ ကိုင်လို့ရမယ့် ဆေးဂွင်
ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုဗျ ..
မောင်ကိုတိုးရဲ့ အရင် အလုပ်မှာ .. အပျိုကြီးတွေ ပေါမှပေါ ပေါ့ .. အများအခေါ်ကတော့ “အပိုကြီး” တွေပေါ့။ သြော် .. အပျိုကြီးတို့ခမျာမှာလည်း “လင်ယူသားမွေး” အရေးကို စဉ်းစားမိဟန် ရှိပုံမရ .. သူတို့ စိတ်အစဉ်မှာ အရိပ်ဝင်နေတာက ငွေကို လုံးခနဲရသော ပွပေါက် (သို့မဟုတ်) “ဂွင်” ဆိုသော ဝေါဟာရကို အာရုံသွင်းထားပုံရသည်။ ပြောလိုက်တဲ့ စကားအချို့ကို အနည်းငယ် ကောင်နုတ်တင်ပြမည် ဆိုရင်ဖြင့်လည်း “အဲဒီကောင် ဟို ဂွင် တွေ့လို့ ပွသွားတာ” “အင်း .. အဲဒါလည်း ဂွင် ပဲ” “တရုတ်ပြည်ဘက်က ဟို ပစ္စည်းတွေကလည်း ဂွင် မသေးဘူး နော်” အစရှိသည်ဖြင့် ဖြစ်လေတော့သည်။
တရက်တော့ ပေါ့ဗျာ ..
“ဒီမှာ မနီလာ၊ မသန္တာ နဲ့ မမွန် တို့ရေ .. ကျွန်တော့်မှာ ဂွင် တစ်ခု တွေ့ထားတယ် .. ပွပေါက် ဗျို့” ဆိုပြီး ရုံးက ရှမ်းလေး ဆိုသော ညီငယ်လေးက ဇာတ်လမ်းကို စချီသည်။ “ဟဲ့ .. နေပါဦး .. နင့် ဂွင် ဆိုတာက ဘာ ဂွင် လည်း” လို့ တစ်ယောက်သော အပျိုကြီးက မျက်လုံး အပြူးသားနဲ့ မေးရှာတော့သည်။ “ဆေးဂွင် .. ဗျို့ .. ဆေးဂွင်” ဆိုပြီး ရှမ်းလေးက ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ရှမ်းလေးက ဆက်ပြီး “ဒါပေမယ့် .. နယ်နယ်ရရ တော့ မဟုတ်ဘူး နော် .. လက်ကြီးမှ ရမယ်” (မှတ်ချက် .. သိတဲ့ အတိုင်းပဲ လေ .. “လက်ကြီး” တယ် ဆိုတာက စီးပွားရေးလောကမှာ “ငွေထုတ်ကြီး” (သို့မဟုတ်) “အရင်းနှီးကြီးခြင်း” လို့ဆိုတာပေါ့ ဗျာ။)
“အေး .. ငါတို့ စိတ်ဝင်စားတယ် .. နင့် ဆေးဂွင် က ဘာဆေးဂွင်လည်း .. ငါတို့ကို ပြော” .. “အာ .. နေပါဦး ဗျာ .. ဒီလို ပြောလို့မရဘူး .. ခင်ဗျားတို့ လက်ကြီးဖို့သာ အရေးကြီးတယ် .. လက်မကြီးရင်တော့ ကိုင်လို့ရမှာ မဟုတ်ဘူး” .. “အာ .. နင် ငါတို့ကို အထင်မသေးပါနဲ့ .. နင့် ဆေးဂွင်က သာ ကြီးပလေ့စေ .. ငါတို့ ရှိသမျှကို ပုံအောပြီး ကိုင်မယ်” လို့ အပျိုကြီးများ ပြောလိုက်တဲ့ စကားအဆုံးမှာ .. ရှမ်းလေး ပြောလိုက်တဲ့ အဖြေကြောင့် .. အပျိုကြီးတွေထံမှ “ဟဲ့ .. သေ x xx xxx .. . ကောင်စုတ် ... x x x” အစရှိတဲ့ ဝေါဟာရများကို ကြားရပေမယ့် .. အခြားကြားရသူအပေါင်းကတော့ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲအောင်ရယ်ကြပါတယ်။
ရှမ်းလေးပြောလိုက်တာက “ဆေးဂွင် ဆိုတာ ဆင်ဂွေးကိုပြောတာ .. ခင်ဗျားတို့ လက်ကြီးရင် သွားကိုင်ပေါ့” ဆိုတာပါပဲ ဗျာ ..
Posted by MYO HAN HTUN at 3:29 PM3comments
Labels: About My Friend, Funny Stories, My Funny Stories
မောင်ကိုတိုး တစ်ယောက် ထိုင်းက မြန်မာ ထမင်းဆိုင်တွေသွားစားတိုင်း မြန်မာပြည်ထုတ် ဂျာနယ်တို့ မဂ္ဂဇင်းတို့ကို လှန်ကြည့်ရတာ အမောသားပါ။ ဒါနဲ့ တစ်နေ့ .. မနက်စာသွားစားရင်း ဂျာနယ်တစ်စောင်ကို ဖတ်မိလိုက်ပါတယ်။
ချူဝစ်ပုံတွေ့တာနဲ့ သူ့အကြောင်းရေး ဘာများရေးထားသလဲဆိုပြီး ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ နောက် အစ အဆုံး ထပ်ဖတ်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ ကျန်ခဲ့လို့ပါပဲ။ ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ ဘယ်မြို့ဆိုတာ ကျန်နေခဲ့တာပါပဲ။ ချူဝစ်ဟာ ဘန်ကောက်မြို့တော်မှ ကလပ်နှင့် ရေချိုးခန်းများစွာ ပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မြို့တော်ဝန် (မြို့စားကြီး ကျွန်တော့်အခေါ်ပေါ့ဗျာ) ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရောက် ရှင်ပြိုင်သူ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တန်း ဖတ်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း အူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းလှတဲ့ သတင်းဆိုတာ ဒယ်ဒီတာတွေ မသိလိုက်တာများလား။
နောက်တစ်ချက်ကလည်း အလွန်ရယ်စရာကောင်းပါတယ်။ ကိုးကား ဆိုတဲ့ နောက်မှာ ထည့်တဲ့ အညွှန်းတွေပါ။ ဥပမာ .. Ref: Internet/ ATS ဆိုတဲ့ စကားလုံးပါပဲ။ ဖြစ်သင့်တာက ဆိုက်အညွှန်း Url အပြည့်အစုံ (သို့) ဆိုက်နာမည် ထည့်ပေးလိုက်ရင် ကောင်းတာပေါ့။ အခုဟာက Internet ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ တကယ့်ကို အူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းလှပါတယ်။
သတင်းထောက်က ဘာတွေကိုးကားကိုးကား အထောက်အထား အခိုင်အလုံမရှိတဲ့ သတင်းဆိုတာ အယ်ဒီတာတွေ သတိထားသင့်တဲ့ အချက်ပါ။
ချူဝစ်အကြောင်းကိုတော့ http://en.wikipedia.org/wiki/Chuwit_Kamolvisit နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဟာသများ (၁)
Posted by MYO HAN HTUN at 2:21 PM6comments
Labels: Bangkok, Bangkok Governor Election, Chuwit, Myanmar Journal, Thailand
Nurse မလေးတွေကို စတတ်တဲ့ ကိုတိုး
မောင်ကိုတိုးတစ်ယောက် နေထိုင်မကောင်းလို့ ထိုင်းမှာ ဆေးရုံသွားပြတိုင်း ရံဖန်ရံခါ
စလေ့ နောက်လေ့ရှိတဲ့ အကျင့်တစ်ခု ကတော့ . . .
ဇာတ်လမ်းက ဒီလို ဗျ
"What's happened! .. Sir" လို့ ဆေးရုံကောင်တာက Nurse မလေးတွေမေးတိုင်း
အတည်ပေါက်နဲ့ ဖြေတတ်တာကတော့ "My heart is broken"တို့ . . . . . . . . .
"heart broken" တို့ . . . . . . . . . . . "Broken! .. (နည်းနည်းလေး အချိန်ဆွဲပြီးမှ) my heart" ဆိုတာပါပဲ။
တစ်ခါတလေလည်း "I don't know whether it can be healed .. I am suffering
from that problem almost5years now" .. ဆိုပြီး အတည်ပေါက်နဲ့ လေကြောနည်းနည်း
ရှည်လိုက်ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ သူတို့က "What is your problem .. Sir" ဆိုပြီး
မေးတော့မှ "My heart is broken" ဆိုပြီး အာစေးငိုင်ငေးသွားအောင် နဲ့
ပြူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားအောင် ဖြေချလိုက်တယ်။ စ မှန်း နောက်မှန်း ချက်ချင်းသိတဲ့
ဆရာမတွေကတော့ ခွက်ထိုးခွက်လန် ရယ်ကျပါတယ်။
တစ်ချို့လည်း နားကြားများလွဲသွားလား ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ "Arai Na" .. “ဘာလဲ ရှင်”
ပေါ့။ “မဟုတ်ရပါဘူး .. ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် စ လိုက်တာပါ” ဆိုပြီး ပြန်ပြန်ပြောပေးရတယ်။
အနားမှာရှိတဲ့ ကြားရတဲ့ လူတစ်ချို့နဲ့ လူနာတစ်ချို့ကတော့ မပြုံးပဲ ၀ါးလုံးကွဲအောင် ရယ်ကြတာက အမှန်ပါ။
Posted by MYO HAN HTUN at 10:24 AM 61 comments
Labels: My Funny Stories
Myo Han Htun's Profile
Gifts For You (Free Downloads)
Since Jan 01, 2007
My Personal Artistic Web Site
ဒါကတော့ ၂၀၀၆ အလွမ်းပြေ ကျွန်တော့်ရဲ့ Personal Artistic Web Site ပါ။